Iindaba - Malunga nomsi we-bbq grill
Indibano yeyona ndlela ilungileyo yokunxibelelana kunye nokunxibelelana nabahlobo; ibarbecue kwindibano inokukhuthaza ngakumbi ubuhlobo phakathi komnye nomnye.
Kodwa ukulungiselela i-barbecue edinayo lilungiselelo elidinisayo ngaphandle koncedo lwezalamane kunye nabahlobo.
Ungawanelisa njani la manyathelo adinayo ngelixa usanelisa umnqweno wokutya i-barbecue? E-China, abantu abancinci, usapho kunye nabahlobo baya kukhetha indlela ekhethekileyo yokwanelisa ulonwabo lwabo lokomoya-Ishwamshwam eliphakathi kobusuku (iindlela zesiTshayina nguXiaoYe)
Ngokufuthi ukutya okucacileyo nokulula kuthatha uvavanyo lwexesha. Ukuze wenze oku kulinda ixesha elide, iigrill ezingenamsi eziqhunyiswa ngegesi ziye zaziwa kwiivenkile ezincinci zokutya.
I-grill engenamsi ithatha umgaqo wokufudumeza isitofu se-ceramic kumacala omabini ukunciphisa umngcipheko womlilo ovulekileyo. Ngenxa yokuba umzimba we-grill ude kakhulu, i-hairdryer eyakhelwe-ngaphakathi yenza ukuba indawo eshushu kakhulu yeendlela ezimbini zokuqokelela phakathi ukufezekisa Isiphumo sokufudumeza okufanayo. Ngenxa yalo msebenzi wokutshatyalaliswa kobushushu, ukutya okunempilo kunye nokumnandi kwe-barbecue kubangele ukungqubana okukhethekileyo.
Iimveliso zomgubo, iziqwenga zegusha, inyama yenkomo, iimbatyisi, kunye nokutya kwaselwandle kunokwanelisa zonke izimuncumuncu ezityiwayo, ubuchule bokupheka obuchubekileyo kunye nokungqubana kweziqholo. Okanye le iya kuba yindibano yosapho lwakho okanye ishishini lelori ezityiwayo, elona xabiso liphantsi, oyena mncedisi ukhawulezayo womvuzo womlingo.
Kakade ke, ukwenzela ukuba kube lula kumaqela ahlukeneyo abantu, i-grill yethu engenamsi ingakhetha ubukhulu obuhlukeneyo, i-0.89 yeemitha, i-1.2 yeemitha, i-1.5 yeemitha, njl., efanelekileyo kakhulu kwizixhobo zebarbecue zorhwebo. Esi sixhobo sisetyenziswe kwizitrato zokutya zase-Southeast Asia kunye ne-Vietnamese cuisines. Esitratweni, ixesha elide uhamba, uya kubafumana. Ubutyebi obunokubakho kwezi zixhobo bukhulu, bukwenza usomashishini ogqwesileyo, ukuqala ngalo mzuzu.
Ixesha lokuposa: Nov-05-2021